Zimbabwean Embassy in Kuwait City - Kuwait
Embassy of Zimbabwe in Kuwait City
The Zimbabwean embassy is located in Kuwait City. The Ministry of foreign affairs of Zimbabwe appoints the Zimbabwean Ambassador in Kuwait. The contact details of the embassy as well as the name of the Zimbabwean ambassador to Kuwait are mentioned below.
For an appointment at the Zimbabwean embassy in Kuwait, please check in first instance the embassy website .
When it is not possible to make an appointment through the website it is best that you contact the embassy in Kuwait City by telephone (+965) 2 565-1517 (+965) 2 531-8716 or email zimkuwait@hotmail.com
The consular department of the embassy of Zimbabwe in Kuwait City can inform you about the services they offer.
Before you visit the Zimbabwean embassy in Kuwait it is best that you contact the consular department first.
Some Zimbabwean embassies do not handle certain consular matters.
- For Zimbabwean passport matters, application for a visa for Zimbabwe and other consular services please contact the embassy in Kuwait City directly by telephone (+965) 2 565-1517 (+965) 2 531-8716 or email zimkuwait@hotmail.com
www.embassy-kuwait.com - This is not the official website of the Zimbabwean Embassy in Kuwait. If you have any requirements for consular services you need to contact the embassy of Zimbabwe in Kuwait City directly.